Ukucaciswa: Iimephu ze-Heatmaps zasimahla kunye nokuRekhodwa kweSeshini yoLungiso lweWebhusayithi | Martech Zone
Ukucaciswa: Iimephu ze-Heatmaps zasimahla kunye nokuRekhodwa kweSeshini yokuPhucula iWebhusayithi
Lwesine, Disemba 30, 2021 Lwesine, Disemba 30, 2021 Douglas Karr
Njengoko siyila kwaye saphuhlisa umxholo weShopify wethu ivenkile yokunxiba kwi-intanethi, besifuna ukuqinisekisa ukuba siyile indawo entle nelula ye-ecommerce engakhange ibhide okanye yoyike abathengi bayo. Omnye umzekelo wovavanyo lwethu loyilo yaba Iinkcukacha ezithe xaxe block eyayineenkcukacha ezongezelelweyo malunga neemveliso. Ukuba sishicilele icandelo kwindawo engagqibekanga, iyakutyhala kakhulu ixabiso kwaye yongeze iqhosha lenqwelo. Nangona kunjalo, ukuba sipapashe ulwazi olungezantsi, isivakashi sinokuphoswa ukuba kukho iinkcukacha ezongezelelweyo.
Saye sagqiba ekubeni senze icandelo loguqulo elibizwe ngokufanelekileyo Iinkcukacha ezithe xaxe. Nangona kunjalo, xa sasiyipapasha kwindawo, saqaphela ngokukhawuleza ukuba iindwendwe azicofa kwicandelo ukuze ziyandise. Ulungiso lwaluchubekile… isalathisi esincinci ecaleni kwesihloko secandelo. Nje ukuba iphunyeziwe, siye sajonga iimaphu zethu zokufudumala kwaye sabona ukuba inani elikhulu labatyeleli ngoku linxibelelane nenguqu.
Ukuba besingakhange sirekhode iiseshini kwaye sivelise iimephu zobushushu, ngekhe sikwazi ukuchonga umba okanye ukuvavanya isisombululo. I-Heatmapping iyimfuneko xa uphuhlisa naluphi na uhlobo lwewebhusayithi, indawo ye-ecommerce, okanye isicelo. Oko kuthethiweyo, izisombululo zokubamba ukushisa zinokubiza kakhulu. Uninzi lusekwe kwinani leendwendwe okanye iiseshini onqwenela ukuzilandela okanye ukurekhoda.
Ngombulelo, isigebenga kwishishini lethu sinesisombululo sasimahla esikhoyo. Ukucaciswa kweMicrosoft. Faka nje ikhowudi yokujonga okucacileyo kwindawo yakho okanye ngeqonga lakho loLawulo lweTag kwaye uvuka kwaye uqhuba kwiiyure nje ezimbalwa njengoko iiseshini zibanjwa. Okungcono, ukucaca kunodibaniso lwe-Google Analytics ... ibeka ikhonkco elifanelekileyo kwiseshini yokudlala kwideshibhodi yakho ye-Google Analytics! Ukucaca kudala umlinganiselo wesiko obizwa ngokuba yi Ukudlala okucacileyo URL ngeseti esezantsi yemibono yephepha. Inqaku elisecaleni... ngeli xesha, unokongeza kuphela ipropathi enye yewebhu ukuze udibanise nokucaca.
IMicrosoft Clarity ibonelela ngezi mpawu zilandelayo...
Iimephu zobushushu ngoko nangoko
Velisa iimephu zobushushu ngokuzenzekelayo kuwo onke amaphepha akho. Bona apho abantu bacofa khona, yintoni abangayihoyiyo, kunye nokuba baskrola kude kangakanani.
Jonga indlela abantu abasebenzisa ngayo indawo yakho ngoshicilelo lweseshoni. Phonononga okusebenzayo, funda oko kufuneka kuphuculwe, kwaye uvavanye izimvo ezintsha.
Ukuqonda kunye namaCandelo
Fumana ngokukhawuleza apho abasebenzisi baphoxeka khona kwaye bajike ezi ngxaki zibe ngamathuba.
Ukucaca yi-GDPR kunye ne-CCPA elungile, ayisebenzisi isampulu, kwaye yakhelwe kumthombo ovulekileyo. Eyona nto ingcono kakhulu uya kuyonwabela zonke iimpawu zeClarity ngexabiso elinguziro. Awunakuze ungene kwimida yendlela okanye unyanzelwe ukuba uphucule ukuya kuhlobo oluhlawulelwayo… simahla!
Bhalisela iMicrosoft Clarity
tags: IcacileUkusebenza kwe-ecommercemicrosoft ukucacaukurekhodwa kweseshoniulungiselelo lwesizauvavanyoukuqinisekiswa kwewebhusayithi